Julaay 30, 2021
Sanduuqa Dhaqaalaha ee McKnight Fund for Neuroscience (MEFN) wuxuu ku dhawaaqay saddexda qaata ee $600,000 ee deeqda deeqda ah illaa 2021 McKnight Innovations Technological Innovations in Neuroscience Awards, iyagoo u aqoonsanaya mashaariicdan awoodooda inay aasaas ahaan u beddelaan habka cilmi baarista neerfaha loo sameeyo. Mid kasta oo ka mid ah mashaariicda wuxuu heli doonaa wadar ahaan $200,000 labada sano ee soo socota, isagoo hormarinaya horumarinta teknolojiyaddan asaasiga ah ee loo adeegsaday in lagu sawiro, lagu kormeero, oo lagu tusaaleeyo shaqada maskaxda. Abaalmarinta 2021 waa:
Timothy Dunn, Ph.D., oo ka tirsan Jaamacadda Duke, kaasoo ka shaqeynaya nidaam lagu qabsado dhaqdhaqaaqa jirka ee maaddooyinka iyadoo la adeegsanayo cabirada 3D (halkii laga cabirayay 2D pixel) iyadoo la isku darayo kaamirooyin fiidyowyo badan ah iyo algorithm barashada mashiinka cusub. Habku wuxuu u oggolaanayaa raadinta xallinta sare ee qaybo yaryar, oo kala go 'ah oo ku jira xayawaannada si xor ah u dhaqma, waxay oggolaataa in wax lagu barto meel bannaan oo dabiici ah, oo xitaa waxay la socon kartaa xayawaanno badan oo is -dhexgal ku leh bulshada, isku -darka astaamaha aan laga helin nidaamyada hadda jira.
Jeffrey Kieft, Ph.D., oo ka tirsan Jaamacadda Colorado School of Medicine, yaa horumarinaya hab injineer RNA si loo abuuro qaab ilaalin oo yarayn kara heerka ay mRNA ku burburiso enzymes. Sidan, cilmi -baarayaashu waxay awoodi doonaan inay maareeyaan tirada badan ee borotiinka mRNA ee gaarka ah ee unugyada, waxtar u leh wax -barashada oo laga yaabo inay xitaa daaweyso xanuunnada qaarkood.
Suhasa Kodandaramaiah, Ph.D., oo ka tirsan Jaamacadda Mataanaha Mataanaha ee Minnesota, kuwaas oo isticmaalaya nidaamyada robotic si ay awood ugu yeeshaan raad -raac aad u xooggan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa maskaxda ee xayawaannada si xor ah u socda. Adeegsiga robotics -ka si loogu raro qalabka weheliya faasas badan oo la mid ah xayawaanka, habkani wuxuu u oggolaanayaa adeegsiga nidaamyo kormeer oo xallinta ka weyn, ka xoog badan, marka loo eego noocyada yar -yar ee inta badan loo adeegsado tijaabooyinka xayawaannada si xor ah u socda.
Baro wax badan oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah mashaariicda cilmi -baarista ee hoose.
Ku saabsan Soo-saarista Teknolojiyada ee Abaalmarinta Neuroscience
Tan iyo markii McKnight Teknolojiyadda Cusub ee Abaalmarinta Neuroscience la aasaasay 1999, MEFN waxay ku biirisay in ka badan $15 milyan teknolojiyad cusub oo loogu talagalay neerfaha iyada oo loo marayo hannaankan abaalmarinta. MEFN waxay si gaar ah u danaynaysaa shaqada qaadata habab cusub oo cusub si kor loogu qaado awoodda wax -ka -beddelka iyo falanqaynta shaqada maskaxda. Farsamooyinka lagu horumariyey taageerada McKnight waa in aakhirka loo diyaariyaa saynisyahannada kale.
"Mar labaad, waxay ahayd wax lagu farxo in la arko xariifnimada ay codsadeyaasheenna u keenayaan farsamooyinka cusub ee neerfaha," ayuu yiri Markus Meister, Ph.D., guddoomiyaha guddiga abaalmarinta iyo Anne P. iyo Benjamin F. Biaggini oo ah borofisar cilmiga noolaha ee Caltech. “Sannadkan, waxaan la kulannay doorasho adag oo ka mid ah horumarro badan oo xiiso leh, abaalmarintuna waxay ku kala duwan tahay baaxad ballaadhan, laga bilaabo qalliinka robotic -ka si loo taageero duubista neerfaha ee jiirka, si loo xakameeyo moodeelka muujinta hidda -wadaha saxda ah, illaa algorithms -ka raadinta 3D ee dhaqanka xayawaanka. ”
Guddiga xulashada sannadkan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa Adrienne Fairhall, Timothy Holy, Loren Looger, Mala Murthy, Alice Ting, iyo Hongkui Zeng, kuwaas oo doortay sannadkan Hal -abuurnimada Farsamada ee Abaalmarinta Neuroscience oo ka timid tartan aad u sarreeya oo ah 73 codsade.
Waraaqaha ujeeddada loogu talagalay Hal -abuurka Teknolojiyada ee 2022 ee Abaalmarinta Neuroscience ayaa la filayaa Isniinta, Diseembar 6, 2021. Ogeysiis ku saabsan hannaanka 2022 ayaa soo bixi doona Ogosto. Guji wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan abaalmarinta
2021 McKnight Hal -abuurnimada Farsamada ee Abaalmarinta Neuroscience
ARIS waxay si xushmad leh u hagaajisaa xallinta astaamaha jirka ee cabbirka leh, waxayna adeegsataa qaabaynta saadaalinta iyadoo lagu saleynayo waxa ay ka ogaato mowduuceeda (habeynta iyo dhererka addimada, sida ay isugu xiran yihiin, sida ay u dhaqaaqaan, iwm.) xogta tababarka ee jiirrada sida xorta ah u dhaqma ka dibna la soo gabagabeeyo iyadoo la adeegsanayo xogta tababarka ee noocyada kale-in diiradda la saaro qaybta bannaan ee laga yaabo in qaybta jirka ay noqoto. Tani waxay adeegsanaysaa awood xisaabeed aad uga yar qalabkii hore ee mugga ahaa ee 3D. Cilmi -baaristiisa, Dr. Dunn wuxuu hirgelin doonaa ARIS wuxuuna xogta ku duubi doonaa miisaanno kala duwan, laga soo bilaabo booska guud iyo hoos -u -socodka dhaqdhaqaaqa astaamaha wanaagsan ee gacmaha, cagaha, iyo wejiga. Cilmi -baaris dheeraad ah ayaa sahamin doonta wax -ku -oolkeeda iyada oo xayawaanno badan ay is -dhexgalaan. Awooddan lagu cabbiro hab -dhaqanka qaab cusub oo sax ah ayaa saamayn ballaaran ku leh barashada cilladaha neerfaha ee saameeya dhaqdhaqaaqa, isku -xirka dhaqdhaqaaqa maskaxda iyo dabeecadda, iyo barashada is -dhexgalka bulshada.
Suhasa Kodandaramaiah, Ph.D., Kaaliyaha Professor Benjamin Mayhugh, Waaxda Farsamada Farsamada, Jaamacadda Minnesota Mataanaha Magaalooyinka